Shiinaha Canvas xirmo xirmo jeebka moodada suufka xarigga bacda suufka xargaha jeex jeex jeebka weelka alaabada lagu keydiyo bacda waa la daabacan karaa logo Soo saare iyo Badeecad Zhihongda
Bacda weelka xirmooyinka jeebka xirmada dharka suufka xirmada bacda suufka wax lagu dhejiyo alaabada lagu keydiyo shiraac bacda lagu keydin karo astaan
QAADASHADA QALABKA IYO MULTIPURPOSE QALABKA SOO SAARKA - Waxay ku habboon tahay isticmaalka cuntada sida keydinta hadhuudhka, nacnaca, miraha iyo khudradda, buugaagta, kabaha, shaandhada shaaha, yogurts, casiirka iyo caanaha lowska, geedaha lagu kariyo iyo xawaashka lagu kariyo maraqyada, oo lagu keydiyo weelasha qaaliga ah ee jikada. Sidoo kale marada jiiska. Kuwani waa ku habboon yihiin xafiiska iyo keydinta bakhaarka.
1. QALABKA QALABKA IYO BADBAADADA QALABKA SOO SAARKA - Ku habboon isticmaalka cuntada sida keydinta hadhuudhka, nacnaca, miraha iyo khudradda, buugaagta, kabaha, shaandhada shaaha, yogurts, casiirka iyo caanaha lowska, geedaha lagu kariyo iyo xawaashka lagu kariyo maraqyada, keydinta jikada qaaliga ah maacuunta. Sidoo kale marada jiiska. Kuwani waa ku habboon yihiin xafiiska iyo keydinta bakhaarka.
2. DHAQAN, BILAASH, WAQTI WAAJIBAAD AH MUSLIN DHARKA QAADASHADA - Waxaa laga sameeyay qiimo dhan 100% Cudur / Muslin taas oo aan sun lahayn oo aan lahayn. In la tirtiro isticmaalka bacda oo laga caawiyo ilaalinta dhulka. Ku beddel iyaga kuwaan ugu fiican, bacda jilicsan ee jilicsan ee jawiga-saaxiibtinimada leh iyo qoyska aamin ah.
3. QAADASHADA QAADASHADA BULSHADA SIXIRKA BADAN EE SIXIRKA BADAN - Baaxadda weyn waxay hanan kartaa waxyaabo badan sidaa darteed uma baahnid inaad safarro badan gasho marka aad wax ka adeeganayso cuntada. Waa mid khafiif ah sidaa darteed waa kuwo aad loo qaadi karo.
4. DHAMMAAN DHAMMAAN DHAQAALAHA DHAQAALAHA EE XARUNTA DHAQAALAHA EE GUDAHA IYO DIBADDA - Tolmada ayaa ah mid aad u adag, oo u adkeysanaya ilmada, isla markaana aan si fudud u dillaaci doonin ama u soo bixi doonin iyadoo aan loo eegayn culeyska sheyga la keydiyay, 100% la hubo.
5.DIY CRAFTS, boorsooyin hadiyado MAXAMUUD, iyo XULASHADA XISBIGA - Ka shaqaynta mashruuc cusub DIY? Boorsooyinkan adiga ayaa loogu talagalay adiga! Waad rinjiyeyn kartaa tan ama qaabka oo aad u qurxin kartaa qaab kasta oo aad rabto. Kuwani sidoo kale waxay u fiican yihiin xaflad ama xaflad aroos ama sida boorsooyin hadiyadeed oo la jeclaan karo. Sii hadiyado ahaan maalmaha dhalashada, Kirismaska ​​iyo ciidaha kale
Magaca Shayga Bacda weelka xirmooyinka jeebka xirmada dharka suufka xirmada bacda suufka wax lagu dhejiyo alaabada lagu keydiyo shiraac bacda lagu keydin karo astaan
Hore: Shandada Boorsada Boorsada Boorsada Boorsada Boorsada Boorsada dhabarka leh ee midabada leh ee Eco Madoow
Xiga: Soosaaraha Boorsada Boorsada Boorsada loogu talagalay kartida xirmada bacda xirmada ee tababarka casharka tababarka ardayga
Custom dib-u-Recycled Shopping linen suuf ...
Logo Custom Custom xayeysiis daabacay Eco-friendly El ...
Khudaarta Khudradda ah Cuntada Mesh Mashiinka Loogu Talagalay
Bacda xayaysiinta bacda weelka jilicsan ee buluuga ah ...